Umkhiqizi we-Solar Charge Controller Ophezulu ayi-10 Emhlabeni Wonke
Sigxila kusilawuli selanga
I-Pwm Solar Charge Controller
I-Ld Solar Charge Controller
I-Sd Solar Charge Controller
I-Od Solar Charge Controller
I-Mpt Solar Charge Controller
I-Td75v Isilawuli Sokushaja Solar
I-Td100v Isilawuli Sokushaja Solar
I-Td150v Isilawuli Sokushaja Solar
I-Td200v Isilawuli Sokushaja Solar
Inqubo Yokuhlola Ikhwalithi
Ikhaya > Kungani Us > Inzuzo Yomkhiqizo > Isitifiketi
Ukubhaliswa Kwesilawuli Sokushaja Solar se-Ldsolar
Ukubhaliswa kwezimpawu zokuhweba.
Ngomkhiqizo obhalisiwe we-LDSOLAR, izinto zethu eziyinhloko yilezi:
1, izilawuli zelanga ze-PWM, ezimele i-Land Dream Series, i-Sky Dream Series ne-Ocean Dream Series enamandla asuka ku-10A kuya ku-60A, i-voltage 12V-24V, 48V.
I-2, izilawuli zelanga ze-MPPT, ezimelwe yi-Tracer Dream Series, ububanzi bamandla ukusuka ku-15A ukuya ku-80A, kanti amandla kagesi angu-12V-24V-48V. Ngokusebenzisa ama-chips we-32-bit angenisiwe kanye nesizukulwane esisha se-algorithm ye-MPPT ezithuthukisiwe, isilawuli sinokunemba okuphezulu kwesampula kanye nesivinini sokuphendula esisheshayo, sikhulisa ngempumelelo izinga lokusebenzisa amaphaneli elanga ngo-20% kuya ku-30%.
Ukuze kuqinisekiswe ukuzizwisa okuhle kumakhasimende lapho kusetshenziswa abalawuli bethu, imikhiqizo ilandela ngokuqinile inqubo yokukhiqiza ye-ISO9001, ithobelana nezinga lakamuva lokuhlola i-EN62109, ithole isitifiketi se-CE, RoHS kanye ne-IEC ejwayelekile yamazwe ngamazwe, kanye namalungelo obunikazi kazwelonke angaphezu kuka-30. Ukulawulwa okuqinile kwezinto ezibonakalayo kanye nesiqinisekiso sokuphathwa kwenqubo yokukhiqiza ngaphezu kuka-99.9% wemikhiqizo efanelekayo kanye nokwaneliseka kwamakhasimende okuphezulu kakhulu
Isitifiketi se-Ldsolar sokuvumelana
Isitifiketi se-ldsolar Wholesale Ldsolar sokuvumelana ne-goodprice-ldsolar,Umsebenzi——Gxila kusilawuli selanga
Izilawuli zokushaja ze-Ldsolar ziklama ilungelo lobunikazi
Lo mkhiqizo wabelana ngebhrendi. Kuyindlela elula nehlakaniphile yokukhangisa, ukukhuthaza kanye nokubiza umthengi esenzweni.
Vele ushiye i-imeyili yakho noma inombolo yocingo efomini lokuxhumana ukuze sikuthumelele isaphulelo samahhala sohlu lwethu olubanzi lwemiklamo!